စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals | Coinfalls ကာစီနို
စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals
အဆိုပါ NetEnt slot ပါ စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals ထိုကာတွန်းပုံစံ slot နှစ်ခုအများစုနဲ့မတူဘဲလေးနက်သောလုပ်ငန်းဝါကွှား. စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals အတူတူယှဉ်၏3အာဏာ crystals စုရုံးငှါမိမိတို့အကြားတိုက်ပွဲစစ်ဘုရင်များ. ဒါကြောင့်, သူတို့သင်နှင့်မိမိတို့အဘို့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအောင်နိုင်မှအခှငျ့အရေးမျှသောကျောက်ထွက်ခွာအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အင်အားကြီးအသုံးချ. အဆိုပါ3စစ်ဘုရင်များအဆိုပါ Barbarian များမှာ, အဆိုပါကပရောဖက်, နှင့် The ဆာမူရိုင်း. သူတို့ကအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးပြန်လည်လှည့်ခြင်းများတူ features တွေထွက် pitching များအတွက်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်ကြ၏, stacked Wild စသည်တို့ကို. သငျသညျကြီးတွေဝင်ငွေအာမခံနှင့်ဖြူစင်သောပျော်စရာအချိန်ရှိသည်ဖို့.
မှစ. 1996, NetEnt ဂိမ်းနည်းပညာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ခဲ့. အဆိုပါကုမ္ပဏီဆွီဒင်ကဲ့သို့ကမ္ဘာအနှံ့အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတွေမှာရုံးတွေရှိပါတယ်, မော်လ်တာ, ယူကရိန်း, ဂျီဘရောလ်, ယူအက်​​စ်အေ, နှင့်ပိုလန်. သူတို့ဟာကျော်တစ်ရေကူးကန်ရှိပါတယ် 700 ကျော်ထမ်းဆောင်န်ထမ်း 100 ကမ္ဘာ့အအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာများ. ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 200 ရက်စွဲနှင့်စာရင်းကိုအစဉ်အဆက်တိုးချဲ့ထားပြီးမကုန်မှီတိုင်အောင်သူတို့၏အကြွေးမှဂိမ်းများကိုစိတျလှုပျရှားဖှယျ.
စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals သင်တို့နှင့်အတူမှောင်မိုက်နောက်ခံတင်ဆက်5စေ့စပ်ကျော်ရွေ့လျားရက်ကြောင့်မှားယွင်း. အဆိုပါ slot ကချက်ချင်း ups နှင့်သင်၏တိုက်ပွဲများစိတ်ဝိညာဉ်အား 30 လက်မှာ paylines. အဆိုပါလောင်းကစားအကွာအဝေး£ 150 ၏အမြင့်ဆုံးမှ£ 0,15 ၏နိမ့်ဆုံးမှစတင်ပါသည်. အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခု RTP ကမ်းလှမ်း 96.89% ကစားသမားမှ. အဆိုပါ slot ကဂိမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောစစ်တိုက်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနှင့် player တွေအတွက်တောက်ပလေထုဖန်တီး. ရိုင်းသင်္ကေတအသောတံပိုးမှုတ် card ကိုသည်နှင့်သင်တို့အဘို့စံချိန်ပေါင်းစပ်အောင်အခြားမည်သည့်သင်္ကေတအဖြစ်ပြုမူ. ရှိပါတယ်2ဒီဂိမ်းထဲမှာပစ္စုပ္ပန် Wild မျိုး, namely the standard wilds and the overlay wilds.
အဆိုပါ3စစ်ဘုရင်များလည်းဖြန့်ကြဲသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်. ထိုကရုဏာအဆိုပါ Barbarian ပါဝငျ, အဆိုပါကပရောဖက်များနှင့်အထိုင်အတွက်ကမ်းလှမ်းဆာမူရိုင်းအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
စစ်တိုက်ခြင်းငှါသင်ဂိမ်းစဉ်အတွင်းလေ့ရှိသောလိမ့်မည်သမျှသော features တွေကိုဆုံးဖြတ်. ထိုအခါ, သငျသညျခံစားခညျြနှောငျထားတဲ့ဂိမ်းအချို့အခြားကျပန်း features တွေရှိပါတယ်. ဤနောက်ဆုံးချန့်စအင်္ဂါရပ်များမှာ, စစ်တိုက်အင်္ဂါရပ်, နှင့် stacked သင်္ကေတများ, အားလုံးသင်ဖို့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဆုဆောင်ခဲ့.
ဂိမ်းထဲမှာအပို feature များအရေအတွက်သည်ဧကန်အမှန်အဒီ slot ကဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင် slot နှစ်ခု၏ဗိုလ်ခြေများထဲကရပ်စေသည်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သော features တွေတစ်သိုလှောင်ကြင်နာမှုတစ်ဦး breakneck အရှိန်အဟုန်မှာစိတျလှုပျရှားစရာဂိမ်းပျော်မွေ့ခဲ့လျှင်, ထိုအခါ စစ်ဘုရင်များ: ပါဝါ၏ crystals သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကို slot ကဖြစ်ပါတယ်.